औंठाछाप चाबहिलमा, लिखित दिन सुकेधारा, ट्रायल दक्षिणढोका :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
औंठाछाप चाबहिलमा, लिखित दिन सुकेधारा, ट्रायल दक्षिणढोका
चाबहिल यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड। तस्बिरः सविना कार्की/सेतोपाटी
यातायात कार्यालयको यस्तो बिजोग
हामीले यसअघि मंसिर २ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङ र एकान्तकुनाको बेथितिबारे लेखेका थियौं जहाँ नयाँ लाइसेन्स निम्ति आवेदन भर्नै सेवाग्राहीले दुई दिन चक्कर काट्नुपर्छ, पाँचवटा कोठा धाउनुपर्छ।
यही क्रममा आज हामी पुगेका छौं चाबहिल यातायात कार्यालय। हेरौं त्यहाँको अवस्था कस्तो छ:
भक्तपुरको बालकोट बस्दै आएका दीपक कार्कीले आजभन्दा दस महिनाअघि २०७७ माघ २० गते बाइक लाइसेन्सका लागि चाबहिल यातायात कार्यालयमा अनलाइन आवेदन दिएका थिए।
आवेदन दिएको आठ महिनापछि तिहारलगत्तै सम्पर्क गर्ने पालो आयो।
तोकिएको दिन कार्यालय पुगेपछि बायोमेट्रिक पूरा गर्न घन्टौं लाग्यो। घरिघरि भइरहने सिस्टम ह्याङले दिनभरि कुरेपछि बल्ल उनले पालो पाए। त्यो सकेर पाँच सय रूपैयाँ राजस्व बुझाउन बैंकको काउन्टरमा पुग्दा बन्द भइसकेको रहेछ।
'काउन्टर दुई बजे बन्द भइजाँदो रहेछ। म त आत्तिएँ। अब परीक्षा दिन नपाउने हो कि भन्ने तनाव भयो। यताउता सोधेँ। भोलिपल्ट बुझाउँदा पनि केही नहुने रहेछ,' उनले सुनाए।
त्यही राजस्व बुझाउन उनी भोलिपल्ट पनि धाउनुपर्यो। कार्यालय अवधिभर बैंक काउन्टर खोल्नुपर्ने नियम भइदिएको भए दुई दिन लाग्ने काम एकदिनमै सकिन्थ्यो।
खैर, राजस्व बुझाएको तीन दिनपछि लिखित परीक्षाको पालो आयो। पालो त आयो तर जाँच दिन कहाँ जाने भन्नेमै दिपक अलमलिए। अरू यातायात कार्यालयले आफ्नै परिसरभित्र जाँच लिन्छ भन्ने उनले सुनेका थिए। तर यहाँ जाँच दिन अन्तै जानुपर्छ भन्ने थाहा पाएर उनी छक्कै परे।
चाबहिल यातायात कार्यालयमा आवेदन दिनेले लिखित परीक्षा निम्ति सुकेधाराको इन्साइड भिजन कलेज जानुपर्ने रहेछ। समयमै पुग्न उनी बिहानै दौडिए। यताउता चहारेपछि, सोधखोज गरेपछि बल्ल कलेज फेला पारे।
लिखित जाँच दिएको साँझ कार्यालयको फेसबुक पेजमा रिजल्ट प्रकाशित भयो।
दिपक पास भए।
'त्यसको तीन दिनपछि ट्रायल भयो,' उनले भने, 'ट्रायल दिन चाहिँ जोरपाटी, गोकर्णेश्वरको दक्षिणढोका पुग्नुपर्ने अर्को झन्झट रहेछ।'
त्यो ठाउँ खोज्न पनि निकै गाह्रो भएको उनी बताउँछन्।
यी सब सास्ती बेहोरे पनि खुसीको कुरा चाहिँ के भने, दिपक पहिलोचोटिमै ट्रायल पास भए।
'आफू पास भएपछि सबै झन्झट बिर्सें,' उनले हाँस्दै भने, 'सबै सरकारी कार्यालय यस्तै त हो नि भन्ने लाग्यो।'
तर सबै सेवाग्राही दिपकजस्तै भाग्यमानी हुँदैनन्। यतिविधि सास्ती बेहोरेपछि अन्तिममा सानो त्रुटिका कारण ट्रायल फेल हुनेहरू टन्नै हुन्छन्। ठेक्कामा लगाइएको थोत्रो बाइक वा स्कुटर चलाएर ट्रायल दिनुपर्ने कारणले कतिले ट्रायल बिगार्छन्। त्यस्ता सेवाग्राहीको रिसको सीमा हुन्न।
मनोज पाण्डे तिनैमध्ये एक हुन्।
उनले पनि सबभन्दा पहिला दिपकले जस्तै बायोमेट्रिक गर्न दिनभरि कुर्नुपर्दाको सास्ती सुनाए। त्यसपछि लिखित परीक्षा दिन अर्को ठाउँ र ट्रायल दिन फेरि अर्कै ठाउँ जानुपर्ने बाध्यता पनि बिस्तार लगाए।
लिखितको चार दिनपछि ट्रायल दिने पालो पाएका मनोजले भने, 'ट्रायल दिन दक्षिणढोका पुग्नुपर्यो। जोरपाटीबाट भित्र रहेछ ट्रायल सेन्टर। परीक्षा त कार्यालय वरिपरि नै भएको भए हुन्थ्यो नि, एक थोक यता अर्को थोक कता हो कता!'
'त्यसमाथि ट्रायलमा फेल भइयो। अब झन् कति धाउनुपर्ने हो,' उनले भने।
दिपक र मनोजजस्ता दैनिक तीन सय बढी सेवाग्राहीले यातायात कार्यालय चाबहिलमा यस्तै समस्या झेल्दै आएका छन्।
यो कार्यालयले दैनिक पाँच सयभन्दा बढीलाई नयाँ लाइसेन्स, रिट्रायल, लाइसेन्स वितरण र नवीकरण लगायत सेवा दिँदै आएको छ। तर व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीहरूले झन्झट बेहोर्नुपरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित पोखरेल स्वीकार गर्छन्।
'कार्यालयले नीतिगत झन्झट सुधार गर्न सक्दैन। तर यहाँको झन्झटिलो सेवा प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने चाहिँ हामीले नै हो,' उनले भने, 'सेवा प्रवाहको चापअनुसार कर्मचारी अभाव छ। त्यसमाथि भौतिक संरचना नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती त हुने नै भयो।'
अहिले यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत छन्। बागमती प्रदेश सरकारलाई यहाँको कर्मचारी अभाव र अन्य झन्झटिलो अवस्थाबारे पटकपटक जानकारी गराइसकेको पोखरेलले बताए।
'कोभिड महामारीका कारण लामो समय सेवा बन्द भएकाले अहिले सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। तर सेवाग्राही बढे पनि कर्मचारी थपिएका छैनन्। बरू दरबन्दी जति छ, त्यसको आधाजति कर्मचारीले मात्र सेवा दिइरहेका छौं। यसबारे हामीले प्रदेश सरकारसँग पटकपटक कुरा राखिसकेका छौँ। तर सुधार हुने छाँटकाँट छैन,' उनले भने।
कार्यालयले आफ्ना सबै सेवा एकै स्थानबाट दिनुपर्नेबारे कुरा उठे पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यस सम्बन्धमा मनोहरा नगरपालिकासँग कुरा भए पनि समस्या सुल्झिन सकेको छैन।
'कार्यालय आफैंले जग्गा भाडामा लिएर सेवा दिन्छु भन्ने हो भने त्यो अधिकार पनि छैन। कार्यालय परिसरभित्र सबै सेवा दिने ठाउँ नहुँदा हामीले विकल्पका रूपमा लिखित परीक्षा सुकेधारा र ट्रायल दक्षिणढोकाबाट गराइरहेका छौं,' सूचना अधिकारी पोखरेलले भने।
पहिले कार्यालय नजिकैको कलेजमा लिखित परीक्षा लिन सुरू गरे पनि अत्यधिक चापले त्यहाँ सम्भव नभएपछि सुकेधारा नै धाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।
'सुकेधाराको कलेजले पनि ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनिरहेकाले अर्को समस्या थपिएको छ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ९, २०७८, ०६:५१:००
नेपालमा महिन्द्राको नयाँ स्कर्पियो-एन अनावरण
पोखराबाट धम्पुससम्म टिभिएसको एओजि राइड
टिभिएस अपाचे आरटिआर १६० ४-भीको बिक्री सुरू, मूल्य कति?
यातायात व्यवस्था विभागले घटायो गाडी भाडा, अब कहाँको कति (हेर्नुस् सूची)